Amai Jenni Williams Voremekedzwa neMubairo weKurwira Kodzero
Amai Jenni Williams, avo vanoita basa rekurwira kodzero dzevanhu muZimbabwe, uye vari mumwe wevakavamba sangano re Women Of Zimbabwe Arise, (WOZA), vakaremekedzwa nezuro manheru mu Washington DC, umo vakapihwa mubairo senzira yekuremekedza basa ravari kuita rekurwira kodzero dzevanhukadzi muZimbabwe.
Muzukuru waGinetta Sagan, muzvare Ana Makinas-Sagan, vanoti sangano re Amnesty International rakafadzwa nekushinga kwa amai Williams avo vane nhengo dzinodarika makumi masere ezviuru. Muzvare Sagan vanoti nhengo dze WOZA dzinogara dzachisungwa padzinenge dzichiratidzira muZimbabwe..
Amai Williams vari kushanya muamerica nemumwe wavo, muzvare Magodonga Mahlangu. Pamabiko ekumberera mubairo uyu nezuro manheru, muzvare Mahlangu vakataurawo pamusoro pematambudziko ari kusangana nemasangano akazvimirira muZimbabwe.
Muzvare Anna Makins-Sagan vanoti sangano reAmnesty International richabatsira amai Williams na muzvare Mahlangu kuti vawane mukana wekutaura nezvemabasa avo kumasangano akasiyana siyana panguva iyo vachange vari muAmerica.
Mubairo wakapihwa amai Williams unopihwa gore rega kumunhu anenge ashanda zvakasimba mukurwira kodzero dzevanhu pasi rose. Mubairo uyu wakatangwa na amai Ginetta Sagan veku Italy, avo vairwira kodzero dzevanhu munyika iyi mugore ra 1945.
Hurongwa hwanezuro hwakarongwa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu mu america anoti Freedom House, Amnesty International USA, National Endownment For Democracy nemamwe.